Lola Nafxanyoon Habasha Oromoo irratti bananif kara hunda deebi argachu qabu.
Blue Party fi Moresh namoota samuu qaban fi kan wa’ee borii yaadan mitti, fageessan ilaaluu wara hin beekne yoo ta’ee ilee, goocha isaa duba nama heeddun akka jiru beekuu qabdu. Waggaa 130 guutuu Oromiyaa fi Uummatoota Cunqurfamoo wara samaa ture, Loltu Menelik irra kasee Hanga maati Menelik fi Hailee Silasee dabalatee dhabilee Nafxanyoota duba jiru. Maallaqa bara sana saman hunda biyya ala tulatani qaban gadii basudhan. Dhaabbilee biyya keessatti ijaracha jiru, Dhaabbilee Nafxanya Biyya ala fi biyya keessa jiran hundi siirna durani deebisuu kan karorfatan ta’uu lafa dhiyooti balinan isin hubaachifna.
Keesumatti Moreshi fi Blue (Samayawi) Party deggersa maallaqaa kan argatan biyya ala Ijoole Nafxanyoota irratti, kan isaan waan hunda ittin qoophesan ilee media isaan ittin fayadaman ilee kan gargaramuu Maallaqaa ijoole Nafxanyoota kanan. Dhabileen Nafxanyoota akka Moresh, Samayawi Party, EPRP, ENTC, UDJ, MEAD, Gingot7, arbanyooch kkf hundi diina Oromooti. Hunda Caalaa garu Samayawi Party fi Moresh (Gala Gaday) kayoon isaan hundi Oromoo baleesuuf waan ta’eef Oromoon waan goochuu qabuu utuu yeroo itti hin keenin itti yaduu qaba. Lola Ogananoon Moresh oromoo irratti egalan waltti ansuun labasacha jiru. Kara website Zehabasha ittifufani jiru;https://www.zehabesha.com/amharic/archives/11329 “Tekle Yeshaw Explains the History of Anole - Hiber Radio” http://www.youtube.com/watch?v=xjBRmTBLnew&feature=share Dhaagefadha. Media hunda irratti waan ittin Oromoo balessan labsuu kan egalanf isaantu beeka.
Prof. Getachew Haile (Moresh coordinator) safuu tokko malee Oromoo irratti maqa xureesi hama Oromoo irratti dhabatan kara website Ethiomedia.com geggesaa jiru. http://www.ethiomedia.com/14news/peace_and_reconciliation.pdf Jaarsi kun Umuri isaa kanatti ani Proffesor ofin jeecha media fi Kitaaban Oromoo xiqeesun isaa Amahara fi Oromoon yoomi ilee waliin deemuu kan hin dandeenye ta’uu isaa mulisa. Jaarsii kun umuri isaa guutuu Oromoo irratti yaakka barreesuu qoofa utuu hin tanee hojii Profshinal isaa dhisee olola irra jira.
Prof. Hailemariyam Larebo media hundan Radio fi website Oromoo xiqiseefu waan hunda goocha jira. http://www.ethiomedia.com/14news/emperor_menelik_ii_the_great.pdf Namni kun dhummatti Menelik fi samicha waggaa 130 Oromoo irratti raawwatamee hunda haluudhan falla isaa Oromoo Amahara akka fixee fi yakka amahara irratti akka raawwatee barressa, Menelik Uummataa Kiba fi Oromoo waan gudaa akka goodhe Oromoo akka barsisee fi qoonna hunda akka barsisee ibsa. Menelik Mandela Caalaa mirga dhala namatiif dhabachuu isaanf badhafamuu qabu jeedhe barreessa. Namni Prof. ofiin jeedhu tokko akkas jeedhe hin barreesu. Namni kun dandeetti dhabuu dhan Universiti Amerika CLEMSON ,irra akkan seeran hojii irra ari’atame raggaa gudatu jira. Namni kun Ummataa fi nama dhunfaf ilee safuu kan hin qabne dha.
http://www.ca4.uscourts.gov/opinions/Unpublished/982234.U.pdf dubsa. Barreefama fula 20 ol ta’uu asii irratti maxansuu hin barbaachisuu kanafuu asii irra wa’ee enyuma nama kana dubsuu ni dandeesu. Namni kun Mangudo obbo Bulcha Demekssa ilee nama xiqeesuu yaaleedha.
Anni dhiga Oromoon of keessa qaba jeedhe kan sobu Yefru Hailu Amahari Manze of qusanno tokko malee Oromoo irratti afaan haqacha jira. Dhiigga Oromoo namni ofi kessa qabuu akkas Oromoo hin abbaruu xifuma. http://www.ethiomedia.com/14news/egnam_bet_esat_alle.pdf Yeroo sirna Amahari ani dhiigga Oromoon qaba jeechun fashini waan goodhatanf Oromoon dogoggoora akkasi irra of egachuu qaba. Utuu maka Oromoo dhuguma qabatee iyuu namni kun midha Oromoo dhiigga isaa irratti raawwatamu hanga 100% hin balaalefatintti nafxanyan qixaa ilaalamuu qaba.
Dr. Amhare Tagibaru Oogana MESION ta’uun Dr. Marara Gudina faa walin kan hojeecha ture, Dr. Marara Gudina xiqeesuuf jeecha waan heeddu barreesun isaa qoofa utuu hin tanee uummataa Oromoo fi qabsa’oota Oromoo hunda irratti jiba qabuu akkasi ibsacha ture.
http://www.ethiomedia.com/14news/amare_tegbaru_response_to_merera_gudina.pdf Namni kun kara lama Oromoo jibbaa jira, tokkoffaa Amaharuma isaatti Oromoo jilbenfachisuuf Oromoo jiiba. Lamaffaa Nafxanya Oromoo samaa ture irra kan dhalatee fi haqaa Oromoo samamen Oromiyyaa keessatti kan gudate waan ta’ee siirnii duri sun akka deebi’uu barbaada.
Nafxanoon Habesha (Amahar) Oromoo ofi fakkesani oduu soba Paltak Radio fi Website irratti barreessa jiru. Waan isaan dubatan fi barreessan hundi wal faleessa jeechooti isaan jeedhan hundi dhugga akka hin tanee namoota QBO keessa ture mitti ijoolen kaleessa dhalatee beeku ni dandeesi. http://www.ethiopianreview.info/amharic/wp-content/uploads/ ኦነግ-ስንት-መልክ-አለው-ከቃሊቲ-ማስታወሻዬ.pdf Namoon akkasi unni dhiiga Oromoo qabna jeecha Oromoo yakkan dhiiga dhugaa qabatan utuu hin tanee dhiiga ololaaf itti fayadamanidha kun beekamuu qaba
Samayawi Partyn duba dhaabtee ofaa kan jiru Prof. Alemayehu G. Mariam https://www.zehabesha.com/demonizing-ethiopian-history/ Menelik yaakaa dalagee kan hin beekneef saba fi sabilamiif gudiina fi badhaadhina kan fidee ta’uu isaa afaan guutee dubata.
Sinishaw Tegegn Qindesitoota Moresh keessa yeroo heeddu kan barreesu araba qoofa dha. http://ethioforum.org/%e1%8c%a5%e1%89%81%e1%88%a9-%e1%88%b0%e1%8b%8d-%e1%8b% Barreefamin isaa waan madalii kasuu mitti haata’uu malee waan kana hunda kan caqasuu barbaaneftu jira. Akka isaan Oromoo xiiqeesaa fi salphisaa jiran ergaa Oromoof dabarsuuf.
Ginbot-7's Andargachew Tsige wa’ee Oromummaa fi Oromiyaa irratti ibsaa inni keene, https://www.youtube.com/watch?v=XNYvk4YmqII namni durse Oromoo xiqeesun Oromiyaa baleesuu dula egalan keessa tokkoffaa fi jiibinsa Oromoo ifaa kan goodhe dha. Garuu utuu kana beekan Ginbot 7 fi Nafxanyoota walii hojeecha kan jiran “Jijjirma ABO” heeddu nama gadisisuu. Dhaabbilee Habasha kayyoon isaan yomii ilee Oromoo baleesuu fi siirna durani deebisuu ta’uu isaa Oromoon hundi irratti walii galuun dura dhabachuu qabu.
Gaafin keenya Oromoon maliif yeroo diini nutti boba’uu caalisee ciisaa?. Callisuu jeechun amanani fudhachuu dha. Beektoon seena, Qubee Generation, Gazeexesitoon Oromoo, Prof. Oromoo lammi isaan irrati falmachuu qabu. Kana malee Uummani Oromoo Nafxanyan kaleessa isaa ajjeesa ture, Harka, Harma, Mila fi qama Sala mura ture, Qabeena Oromoo hunda dhunfatee Oromoo garboonfatee irra jiracha ture deebi’ee dhufuf yeroo wal gurmeesuu caalifnee ilaalun salphina. Namoon baayeen Nafxanyan kana boodee hin deebi’uu jeedhan kan tufatan jiru diina tufachuun ofi tufachuu dha. Oromoon Bakka jirtu, waan dandeesuun ka’ii nafxanaa falmadhu, diina of keessa basii, hariroo diina waliin qabduu dhabii. Yaakkaa Oromoo xiqeesuu irratti Nafxanyoon Amahara boba’aan kana Oromoon immoo murtee danda’ee hunda itti murteesun nannoo isaa keessa basuun mirga isaa kabaja isaa egachuu qaba.
Ijoo dubii GPO